भरतपुरमा अटोरिक्सा चालकमाथि प्रहरीले गोली चलायो, के छ अवस्था ? — Sanchar Kendra
भरतपुरमा अटोरिक्सा चालकमाथि प्रहरीले गोली चलायो, के छ अवस्था ?
चितवनको भरतपुरमा प्रहरी र अटोरिक्सा चालकमाथि प्रहरीले गोली चलाएको छ । बुधबार प्रहरीले चलाएको गोली लागेर अटोरिक्सा चालक नवलपुर गैँडाकोटका महेन्द्र घाइते भएका छन् । उनको पूर्ण पहिचान खुल्न सकेको छैन । उनको खुट्टामा गोली लागेको छ । घाइतेको उपचार भइरहेको छ भने अवस्था सामान्य रहेको बताईएको छ ।
भरतपुरस्थित केन्द्रीय बस टर्मिनलमा रिक्सा व्यवसायी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिक रहेको केन्द्रीय बस टर्मिनलमा भएको पर्दशनका क्रममा दुवै पक्षबीच झडप भएको हो । प्रहरीलाई प्रदर्शनकारीहरुलाई लाठी चार्ज गर्दै कैयौं सेल अश्रु ग्यास र १० राउण्ड गोली लगाएको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकाले साउन ५ गते देखि भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य राजमार्गमा सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । महानगरपालिकाले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध अटोरिक्सा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।